बाल कथा : पण्डित र राजा « Janata Samachar
बाल कथा : पण्डित र राजा
धेरै पहिले एउटा सानो गाउँमा घनश्याम नामका पण्डित बस्थे । त्यहि गाउँमा पसल चलाएर एक जना व्यापारी पनि बस्नेगर्थे । घनश्याम पण्डितले एक दिन ती पसलेलाई पाँच सय रुपैयाँ राख्न दिए । आफ्नी छोरीको विवाहमा लिने गरी उनले पसलेलाई पैसा राख्न दिएका थिए ।
केही वर्षपछि पण्डितकी छोरी ठूली भइ । उनको विवाह गर्ने बेला भयो । पण्डितले पसलेलाई राख्न दिएको पैसा माग्न गए । तर पसलेले आफूलाई पैसाको बारेमा केही थाहा नभएको बतायो । उसले भन्यो, ‘कुन पैसा ? मलाई कहिले पैसा दिनुभएको थियो र ? केही लिखित प्रमाण छ ?’ पसलेको कुरा सुनेर पण्डित छक्क परे । पण्डितसँग कुनै लिखित प्रमाण नभएकाले पैसा लिने कुनै उपाय देखेनन् । उनलाई छोरीको विवाह गर्न नै समस्या भयो । केही दिनपछि उनले एउटा उपाय सोचे । पण्डित अब पसलेले पैसा फिर्ता नदिएको बारे राजालाई सुनाउने निर्णयमा पुगे । राजा केही निर्णय गरिदेलान र आफूले पैसा पाउँला भन्ने उनमा आशा पलायो ।
उनी तुरुन्तै राजा भएको ठाउँ गए र आफ्नो समस्या सुनाए । राजाले पण्डितका कुरा सुनेर भने, ‘भोली मेरो सवारी हुन्छ । तिमी त्यहि पसलेको पसल छेउमा उभिरहनु ।’
अर्को दिन साँच्चै राजाको गाउँमा सवारी भयो । गाउँलेहरुले फुलमालाले राजालाई स्वागत र सम्मान गरे । घनश्याम पण्डित त्यहि पसल नजिकै उभिरहेका थिए । राजाले पण्डितलाई देख्ने बित्तिैकै प्रणाम गरे र भने, ‘गुरु जी, तपाइँ यहाँ कसरी रु तपाइँ त हाम्रो गुरु हो । आउनुस, यहाँ बग्गीमा बस्नुस ।’ पसलेले यो सबै देखिरहेको थियो ।
पण्डित र राजा दुवैजना पसलबाट केही पर पुगेपछि राजाले पण्डितलाई बग्गीबाट उतारे र भने, ‘पण्डितजी, मैले तपाईको काम गर्दिएको छु । अब बाँकी तपाइँको भाग्यमा जे छ त्यहि हुन्छ ।’
उता पसले पण्डित र राजाको राम्रो सम्बन्ध भएको सोचेर छक्क परिरहेको थियो । कतै पण्डितले राजालाई भनेर मेरो उठिबास लगाउने त हैन भन्ने उसमा डर पनि पलायो ।
त्यसपछि पसलेले आफ्नो कामदारलाई पण्डितलाई बोलाएर ल्याउन लगायो । पण्डित एउटा रुखको मुनि बसेर केही सोचिरहेका थिए । राजाले के गरेको भन्ने पनि बुझेनन् । आफ्नो पैसा नआउने भयो भन्ने पीरमा थिए । त्यतिकैमा पसलेको कामदार आएर पण्डितलाई खुब सम्मान साथ बोलायो र लिएर गयो ।
पण्डित आउने बित्तिकै पसलेले प्रणाम गर्यो र भन्यो, ‘मैले धेरै मेहनेत गरेर पुराना खाता हेरेँ । खातामा १० वर्षदेखि तपाइँको पाँच सय रुपैयाँ जम्मा भएको भेटेँ । हिसाब गर्दा ब्याज पनि बाह्र हजार रुपैयाँ भइसकेको रहेछ ।
पण्डित जी तपाइँको छोरी मेरो पनि छोरी हो । त्यसैले एक हजार बढी पैसा मेरो तर्फबाट लिएर जानुस् र छोरीको विवाह राम्रोसँग गर्नुस ।’
त्यसपछि पण्डितले पसलेबाट १३ हजार रुपैयाँ पाए र सम्मानसाथ बिदा भए ।
संकलन : अम्बिका खड्का
धेरै पहिले एउटा शिवपुर नामको गाउँमा एक जना टोकरीवाला बस्थे । उनी जंगलबाट बाँस काटेर
नोर्देन रुम्बाका दुई कविता
कवि तथा गीतकार नोर्देन रुम्बा (तामाङ) को जन्म १५ मे १९४९ मा दार्जिलिङमा भएको थियो
-इन्दिरा प्रसाई ‘आन्टी !’ घर अघिल्तिरको गल्लीको पसलमा हरियो खुर्सानी किन्दै थिएँ । त्यसैबेला पछिल्तिरबाट
कविता : एउटा अध्यारोको अनुष्ठान
–ठाकुर बेलवासे तिमीलाई गहिरो गरी पढन मैले एउटा सिंगो रात मागेको छु म कल्पना गर्न